Museveni oo booqanaya Khartuum - BBC News Somali
Museveni oo booqanaya Khartuum
15 Sebtembar 2015
Image caption Sudan iyo Uganda waxa ay imuhiim u yihiin dejinta colaadda Konnfurta Suudaan.
Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa maanta oo Talaado ah booqanaya magaalada Khartuum ee dalka Sudan. Xiriirka labadani dal ad u xumaa muddo tobanaan sano ah, ayadoo labada dhinac ay isku eedeynayeen in mid kasta uu taageero siiyo fallaagada dalka kale ka hor jeedda.Qodobka ugu muhiimsan ayaa noqonaya in ay ka wada xaajoodaan xiisadda ka taagan Koofurta Sudan oo dhinac kasta uu dan ka leeyahay.
Inkastoo heshiis nabadeed ay kala saxiixdeen madaxweyne Salva Kiir iyo hoggaamiyaha mucaaradka Riek Machar, haddan wali lama gaarin heshiis nabadeed oo buuxa.
Madaxweyne Cumar Al-Bashiir-ka Suudaan ayaa muddo sanaddo ah taageera weyn u fidinayay Machar halka ciidamada Ugandana ay ku sugnaayeen dalka Koonfurta Suudaan tan iyo billowgii colaadda si ay garab u siiyaan dowladda.
Dad badan ayaa rajeynaya in labada madaxweyne ay cadaadis saari karaan labada dhinac si ay u dhaqan geliyaan heshiiskii nabadda.
Waxaana wasiirka arrimaha gudaha dalka Uganda Okello Oryem uu sheegay in Kampala ay u baahan tahay in Khartuum ay u xaqiijiso in ciidamadeeda ka jooga koonfurta Suudaan aysan dhibaato ku ahayn Khartuum.
Waxaa jiray kala shaki u dhaxeeya madaxweyne Bashiir iyo dhNiggiisa Uganda ee Yoweri Museveni oo aan Suudaan booqan tan iyo sanadkii 2005-tii.
Xukumadda Kampala waxa ay si weyn u taageeri jirtay halganka madax bannaanida ee koonfurta Suudaan halka Khartuumna ay taageeri jirtay fallaagada Uganda ee LRA.
Uganda waxa ay marar badan sheegaty in hoggaamiyaha fallaagadaasi Joseph Kony uu ku dhuumaaleysanayo degaanka Kafia Kingi oo ah dhul ay Suudaan maamusho oo ku yaala xudduuuda koonfurta Suudan. Sanadkii la soo dhaafayna, Khartuum waxa ay u yeeratay safiirkeeda u fadhiyay Kampala iyaga oo ka careysaynayd in Uganda ay gabbaad siineyso fallaagada dalka Suudaan.